महोत्तरी, २७ मंसिर -महोत्तरी जिल्ला प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर -१ बाट पराजित उम्मेदवार सिताराम भण्डारीले बिजयी उम्मेदवार गिरिराजमणि पोखरेललाई बधाई दिनुभएको छ ।
नेपाली काग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार रहनुभएका भण्डारी ले ९४७५ मत ल्याएर पोखरेल सङ्ग पराजित हुनुभएको थियो । मतदाताको घर-घरमा पुगेर आभार व्यक्त गर्ने क्रममा पोखरेल आफ्नो प्रतिस्पर्धी भण्डारीलाई भेट्न गौशाला नगरपालिका -१० भरतपुर स्थित भण्डारीको निवासमा नै पुग्नुभएको थियो ।
बाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार पोखरेल घरैमा भेट्न आएपछि भण्डारी भावुक बन्नु भएको थियो ।
भण्डारीले पोखरेलको प्रसंशा गर्दै पोखरेल सदाबहार नेता भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । भेटमा भण्डारीले पोखरेललाई जनताले दिएको मतको कदर गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सचिवालय सदस्य एवम् बिना बिभागिय मन्त्री समेत रहनुभएका पोखरेलले जनताले दिएको मतको सम्मान गर्ने बताउनुभयो ।
हामी जनताको सेवक हौ, जुन पार्टीमा भएनी जनताको सेवा गर्ने बाहेक हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन पोखरेल ले भन्नुभयो : भण्डारी दाइ सङ्ग सल्लाह र सहकार्य गरेर अघि बढ्छु ।
नेपाली काग्रेसका उम्मेदवार भण्डारीको घरैमा पुग्नुभएका पोखरेललाई भण्डारीका ९६ बर्षिया आमा लक्ष्मिदेवि भण्डारीले टीका र माला लगाएर बधाई दिदै जो जहाँ भएनी मिलेर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । ९६ बर्षिया वृद्ध भण्डारी भन्नुभयो : जस्ले जिते पनि जनतालाई सुख र शान्ति मिलोस मेरो आशीर्वाद छ ।
महोत्तरी-१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पोखरेलले २३७७६ मत ल्याएर बिजयी हुनुभएको थियो भने उहाँको निकतम प्रतिद्वन्द्वी सङघिय समाजवादी फोरमका लक्ष्मी महतोले १९४९२ मत ल्याउनु भएको थियो । काग्रेसका उम्मेदवार सिताराम भण्डारी भने ९४७५ मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा रहनुभएको छ ।
गोबिन्द केसीलाई उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउने तयारी
खोजपत्रकारिताका नाममा हामीमाथि भ्रम सिर्जना गर्ने नियत देखियोः चन्द्र ढकाल (विज्ञप्तिसहित)
खाने हैन त ‘रोजगार संयोजक’ को जागिर ? ७५३ स्थानीय तहमा मागिँदैछ आवेदन
डावोसको निम्तोबाट नेपाललाई विश्वले महत्व दिइरहेको प्रष्ट हुन्छ– प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले पाएको सफलतालाई विश्वले पनि नजिकबाट नियाली रहेको बताएका छन् । शुक्रबार संसदमा सांसद कृष्णभक्त पोखरलेलले प्रधानमन्त्रीको स्वीट्जरल्याण्ड भ्रमण र कार्...
डा. केसीको मागबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ- एउटा व्यक्तिको लहडले देश चल्दैन
विराटनगर उच्च अदालतमा ४ जना नयाँ न्यायाधीश, ५ न्यायाधीशमाथि छानबिनको प्रक्रिया शुरु
महारानी एलिजाबेथका पति परे सडक दुर्घटनामा
बेहुलीलाई लाग्यो गोली, भोलिपल्ट घाइते अवस्थामै गरिन् अग्निपरिक्रमा
कर्णालीमा चिस्यान केन्द्र बन्ने, डीपीआर निर्माण गरिँदै